NISA oo Shabaab-nimo u xirtay guddoomiyaha iyo ku-xigeenka rugta ganacsiga gobolka Banaadir – Hornafrik Media Network
Ciidamada NISA ayaa galabta xiray guddoomiyaha rugta Ganacsiga gobolka Banaadir iyo ku xigeenkisa, kaddib markii ay dhowaan soo baxday warar sheegaya in magacaabiddiisa ay kaalin ku laheyd Al-Shabaab.
Ilo wareedyo ku dhow dhow NISA ayaa sheegaya in Axmed Cabdullaahi Xasan oo ahaa guddoomiyaha Rugta Ganacsiga gobolka Banaadir iyo ku xigeenkiisa Axmed Jimcaale la xiray, kuwaas oo lagu tuhmayo inay wada shaqeyn la leeyihiin Al-Shabaab.
Warbixin dhawaan ay baahisay Idaacada VOA laanteeda afka Soomaaliga ayaa lagu soo bandhigay macluumaad kala duwan oo sheegayay in Al-Shabaab ay kaalin ku laheyd magacaabidda guddoomiyaha Rugta Ganacsiga gobolka Banaadir.
Sidoo kale warbixinta ayaa waxaa lagu wareystay Ganacsato kala duwan oo magacooda la qariyay, kuwaas oo sheegay in Al-Shabaab ay soo magacaabatay guddoomiyaha oo dhankeeda ka yimid, inkastoo ninka la sheegay inuu ahaa guddoomiyaha Rugta Ganacsiga gobolka uu beeniyay.
Arrintan ayaa aheyd mid layaab ku noqotay bulshada Soomaaliyeed in markii u horeysay Al-Shabaab, kaalin ama xubno rasmi ku yeeshaan Rugta Ganacsiga, iyadoo horay u jirtay in Al-Shabaab canshuuro ka qaadaan Ganacsatada Muqdisho iyo alaabaha ka soo dega Dekedda weyn ee Muqdisho.
Hey’adda NISA ayaa muddooyinkii u dambeeyay qaaday tallaabooyin wax ku ool ah amniga caasimadda.
Waxaana jiray howlgallo lagu soo qabtay dad lagu tuhmayo Al-Shabaab, waxaana la howlgeliyay ciidamo qarsoon oo dhar cad ah, iyadoo meesha laga saaray ciidankii hubeysnaa ee muuqday, waxaana tallaabadaas ay horseed u noqotay sida ay qabaan xeel dheera yaal amni in gacanta lagu soo dhigo dad badan oo ka tirsanaa Al-Shabaab.
Sidoo kale waxaa inta badan yaraaday falalkii khaarijinta oo dhalinyaro bastooladu ku hubeysan ay ka geysan jireen magaalada Muqdisho.